Gaas “Cabdi qeybdiid xoog ayuu rabaa inuu ka dhigo heshiiska wuxuuna yiri Fad ama ha fadin waa lagu fadsiinaa”+ VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gaas “Cabdi qeybdiid xoog ayuu rabaa inuu ka dhigo heshiiska wuxuuna yiri Fad ama ha fadin waa lagu fadsiinaa”+ VIDEO
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa ka hadlay hadal kasoo baxay 31-Bishii tagtay Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), kaasi oo ku saabsanaa arimaha maamul usameynta Gobalada mudug iyo Galgaduud.
Mr Gaas oo ka hadlayay Madaxtooyada Puntland, ayaa wuxuu sheegay in raga qaarkood ay doonayaan in heshiiska Maamul usameynta Gobalada Mudug iyo Galgaduud inay xoog ka dhigaan, wuxuuna tusaale usoo qaatay Madaxweynaha maamulka Galmudug.
“Raga qaarkood waxa ay doonayaan in heshiiskaan xoog ay ka dhigaan Cabdi qeybdiid wuxuu yiri maalintii heshiiskaasi ay saxiixeen Fad ama ha fadin waa lagu fadsiinaa”Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
C/wali Maxamed Cali ayaa sheegay in dadka ay yihiin jaar ayna kuwada degan yihiin heshiisyo rasmi ah oo lakala saxiixday, sidaasi awgeedna uusan wanaagsaneyn xadgudubka iyo xoog ku maquuninta aqbalida heshiiskaasi.
Aragtida Puntland ayuu markale ku celiyay inay tahay in heshiiskaasi uu yahay mid qaldan oo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku deg-degtay sidaasi awgeedna loo baahan yahay in lakala cadeeyo heshiisk Maamul usameynta Gobalada Mudug iyo Galgaduud.
31 Bishii tagtay markii Madaxtooyada Soomaaliya lagu saxiixaayay heshiiska Maamul usameynta Gobalada Mudug iyo Galgaduud, ayaa Madaxweynaha Maamulka Galmudug xaflad uu Madaxtooyada Soomaaliya ka jeediyay ku sheegay in heshiiskaan maamul usameynta Gobalada Mudug iyo Galgaduud uu yahay “Fad ama ha fadin waa lagu fadsiin” oo macnaheeda yahay aqbal ama ha aqbalin waa lagu aqbalsiinaa.
Puntland ayaa xiriirka ugu jartay Dowladda Federaalka Soomaaliya, heshiiskaasi awgeed, waxaana hada socda Dadaalo Qaramada Midoobay ay wado oo ku aadan isku soo dhaweynta Dowladda Dhexe iyo maamulka Puntland.